Abantu abaningi kuyaye kamuva nazo isidingo ukuvikela amalungelo abo. Ezimweni eziningi, lokhu kusebenza kumangala ezihlobene umonakalo kwempahla, owabangela umonakalo impahla nokunye. D. Nokho, kwenzeka ukuthi umuntu othinta nezinye izindawo izithakazelo womuntu. Kulokhu, ungafaka isimangalo ukunxeshezelwa umonakalo zokuziphatha.
Okokuqala, ake zihlale kubo umqondo yokugcina. Kwathi eRussia kusukela West, okuyinto kuyingxenye yokuphila kwansuku zonke. Esikhathini isichazamazwi bakithi elithi "umonakalo zokuziphatha" avele hhayi ngakho kudala. Nokho, lo mthetho isivele kuvikelwe amanye amaphuzu.
Ngokwesibonelo, e-civil umthetho welithi "umonakalo zokuziphatha" sihunyushwa ngokuyinhloko njengoba ehlushwa zokuziphatha, indoda abanolwazi, bese kuphela ehlangene ngokomzimba kubo. Kulesi sisekelo, kuyafaneleka ukuthi ukufaka icala mayelana nalo muntu zomthetho angeke, njengoba ngokusho kwakhe hhayi ukusebenzisa igama elithi "zokuziphatha".
Uma uthumela ukufuna inhlawulo ngoba umonakalo zokuziphatha, kufanele sikhumbule ukuthi kamuva lokhu kungase kudingeke ukuze abonakale. Okungukuthi, udinga ukuba ne-ubufakazi bokuthi empeleni isisulu ubuhlungu abhekana nabo, futhi kunzima ngempela. Inkantolo kuyodingeka ukuba siveze ubufakazi impahla. Lokhu kungase kube imibiko yezokwelapha futhi imibhalo ukuthi kufanele zibandakanye wonke imiphumela lwesigemegeme esibuhlungu, kokubili emzimbeni nasengqondweni. Lapha ungakwazi unamathisele sicashunwa umlando wezokwelapha. Ungagxambukeli kulezi imibhalo isitifiketi sokuhlala esibhedlela (uma ikhona), kanye nokunye. D.
Isenzo ngokona ngcono ngemva kokuxoxisana ummeli abanekhono uzokwazi ukubona futhi iphakamise izikhathi nenzuzo kakhulu isinqumo esivuna ummangali. Ngokuvamile umphumela kuzwa kuzoncika ekutheni wecala ummangalelwa sika. Kodwa zikhona izizathu ngeke zidlale ngaphansi okuyinto indima. Lapha, ngokwesibonelo, zihlanganisa imithombo umonakalo empilweni, kokuba kwengozi (izindlela zokuhamba, ubuthi, ugesi kanye nokunye. D.). Wakulahla yokwanda ngamabomu ulwazi olungamanga ezingase ukuliveza lingamanga idumela (siqu noma ibhizinisi), isithunzi nodumo ummangali.
Nesitatimende sezinxephezelo - idokhumenti ibaluleke kakhulu kuvikeleke izidingo zabo. Kulokhu, lokho okubalulekile akuyona kuphela okuqukethwe kodwa futhi ifomu. Ngo kwesokunxele (njengaku asemthethweni kakhulu) ekhoneni igama umzimba, okuyinto ithunyelwa iphepha, ngokuvamile ebekiwe idatha yomuntu siqu of kummangali futhi ummangalelwa (Igama eliphelele, ikheli, izinombolo zocingo).
Inani imali kuboniswe edingekayo ehilelekile njengebalulekile. Kungcono ukunquma kusengaphambili. Yiqiniso, akukho muntu ongaqinisekisa ukuthi isimangalo ukunxeshezelwa umonakalo okungezona yezimali uyakusutha, futhi isinqumo - esivuna isisulu, ngemva kwalokho-ke uzokhokha yonke imali eceliwe. Nokho, ukuhlolwa qualitative umonakalo (ikhumbula ubufakazi obungenhla) ongavikela ngokuzehlukanisa yokuthi ummangalelwa angeke ekuqaleni phansi funa. I abanekhono kunabo ukunquma inani ukusiza uchwepheshe, naye ngeke kufuthwe lesi sibalo (okuyinto evame omubi ulungisa inkantolo kummangali).
Esitatimendeni, kubalulekile ukuchaza ngokuningiliziwe, uthathelwe base ubufakazi kanjani futhi nini ukulimala kwabangelwa ukuba isisulu. Okulandelayo ukuze ucacise kungaba ingozi empilweni engokomoya nengokwenyama ka ummangali uye wahlupheka, kanye nemiphumela yako. Ekupheleni uhlu amaphepha adingekayo ohambisana kuthiwa ubufakazi amazwi lohlaselwayo. Isimangalo ukunxeshezelwa umonakalo okungezona yezimali ngaphezulu angase anqobe uma wonke amaphepha zilungile futhi elihlotshiswe kahle. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi ukukhuluma ummeli, futhi ulwazi mayelana payment for services bakhe kamuva babiza icala.
Ungakwazi kancane ezinyakaza izimoto dlula khona?
Imigomo nokukhokhwa ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso
Onion "Bamberger": incazelo ezihlukahlukene, ukubuyekezwa, izici ukutshala kanye isivuno
Izingane izihlibhi sabakhubazekile. Izibuyekezo umthengi
Syzran ezibiyele: umlando, incazelo kanye namathiphu zabahamba